Listening Week (2) - Smart OET Training Centre
Listening Week (2)
Categories: Online Listening
Week2– Day 1 Plan
Day 1 Lessons ➡ Day 1 တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ Listening Part (C) Format Listening Test (1) - Part (C) - Extract (1) Listening Test (1) - Part (C) - Extract (2) ➡ Day 1 တွင် Listening Part (C) အကြောင်းကို လေ့လာပြီး Exercise များကို ဖြေဆိုရပါမည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark complete ကို နှိပ်၍ သင်ခန်းစာများသို့ သွားနိုင်ပါသည်
Listening Part (C) Format
🔸 ဒီ Video ထဲမှာ Listening Part (C) Format အကြောင်းကို ရှင်းပြပေးထားပါတယ် 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို ချိန်လို့ ရပါတယ် 🔸 Computer မှာ Full screen mode / Phone မှာ Rotate Screen နဲ့ကြည့်ရင်လဲ စာလုံးတွေ ပိုဖတ်လို့ အဆင်ပြေပါတယ် Listening Part (C) Format 🔸Duration = 18 minutes 🔸 Video ကိုကြည့်ပြီးလျှင် Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
Listening Test (1) – Part (C) – Extract (1)
Extract (1)Questions - (31-36) How to Answer 🔸 Listening file ကို အရင်ဖွင့်ပြီး နားထောင်ပါ🔸 Listening audio ရှေ့ဆုံးတွင် မေးခွန်းအကြောင်း ရှင်းပြသံကြားရမည်🔸 Test audio စမည့် အချိန်တွင် ‘တီ’ ဟု အသံကြားရမည်🔸 ထိုအချိန်မတိုင်ခင် 90 seconds မေးခွန်းဖတ်ချိန်ရပါသည်🔸 Test audio စသည်နှင့် နားထောင်နေချိန် မေးခွန်းများကို တစ်ပြိုင်နက် လိုက်ဖြေပါ🔸 A / B / C ထဲမှ မှန်သည့်အဖြေကို ရွေးချယ် ဖြေဆိုရပါမည်🔸 အဖြေတိုက်ပြီးလျှင် လွတ်သွားသော စာလုံးများ၊အကြောင်းအရာများကို Audio Script ကို နှိပ်ကြည့်၍ အသံဖိုင်ပြန်ဖွင့်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လေ့လာပါ Complete your ... Read more Listening Test (1) – Part (C) – Extract (1)
Listening Test (1) – Part (C) – Extract (2)
Extract (2)Questions - (37-42) How to Answer 🔸 Listening file ကို အရင်ဖွင့်ပြီး နားထောင်ပါ🔸 Listening audio ရှေ့ဆုံးတွင် မေးခွန်းအကြောင်း ရှင်းပြသံကြားရမည်🔸 Test audio စမည့် အချိန်တွင် ‘တီ’ ဟု အသံကြားရမည်🔸 ထိုအချိန်မတိုင်ခင် 90 seconds မေးခွန်းဖတ်ချိန်ရပါသည်🔸 Test audio စသည်နှင့် နားထောင်နေချိန် မေးခွန်းများကို တစ်ပြိုင်နက် လိုက်ဖြေပါ🔸 A / B / C ထဲမှ မှန်သည့်အဖြေကို ရွေးချယ် ဖြေဆိုရပါမည်🔸 အဖြေတိုက်ပြီးလျှင် လွတ်သွားသော စာလုံးများ၊အကြောင်းအရာများကို Audio Script ကို နှိပ်ကြည့်၍ အသံဖိုင်ပြန်ဖွင့်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လေ့လာပါ Complete your ... Read more Listening Test (1) – Part (C) – Extract (2)
Week2– Day 1 Summary
Congratulation! You have completed Week2- Day 1 Lessons. Summary of Day 1 Lessons Listening Part (C) Format Listening Test (1) - Part (C) - Extract (1) Listening Test (1) - Part (C) - Extract (2) ➡ Listening Format (A +B+C) ၃မျိုးလုံး ကို လေ့လာပြီး ဖြစ်သောကြောင့် နောက်ရက်များတွင် မေးခွန်းအစုံလိုက် လေ့ကျင့်ရပါမည် ➡ လေ့လာပြီးသား သင်ခန်းစာများကိုလည်း အချိန်မရွေး ပြန်လေ့ကျင့်၍ ရပါသည် ... Read more Week2– Day 1 Summary
Week2– Day2Plan
Day2Lessons ➡ Day2တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ Listening Test (2) - Part (A) Listening Test (2) - Part (B) Listening Test (2) - Part (C) ➡ Day2တွင် Listening Test (2) မှ လေ့ကျင့်ခန်းများကို ဖြေဆိုရပါမည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark complete ကို နှိပ်၍ သင်ခန်းစာများသို့ သွားနိုင်ပါသည်
Listening Test (2) – Part (A) – Extract (1)
Extract (1)Questions - (1-12) How to Answer 🔸 Listening file ကို အရင်ဖွင့်ပြီး နားထောင်ပါ🔸 Listening audio ရှေ့ဆုံးတွင် မေးခွန်းအကြောင်း ရှင်းပြသံကြားရမည်🔸 Test audio စမည့် အချိန်တွင် ‘တီ’ ဟု အသံကြားရမည်🔸 ထိုအချိန်မတိုင်ခင် 30 seconds မေးခွန်းဖတ်ချိန်ရပါသည်🔸 Test audio စသည်နှင့် နားထောင်နေချိန် မေးခွန်းများကို တစ်ပြိုင်နက် လိုက်ဖြေပါ🔸 ကွက်လပ်များတွင် One word သို့မဟုတ် Short Phrase ဖြေဆိုရပါမည်🔸 အဖြေတိုက်ပြီးလျှင် လွတ်သွားသော စာလုံးများ၊အကြောင်းအရာများကို Audio Script ကို နှိပ်ကြည့်၍ အသံဖိုင်ပြန်ဖွင့်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လေ့လာပါ Complete the note ... Read more Listening Test (2) – Part (A) – Extract (1)
Listening Test (2) – Part (A) – Extract (2)
Extract (2)Questions - (13-24) How to Answer 🔸 Listening file ကို အရင်ဖွင့်ပြီး နားထောင်ပါ🔸 Listening audio ရှေ့ဆုံးတွင် မေးခွန်းအကြောင်း ရှင်းပြသံကြားရမည်🔸 Test audio စမည့် အချိန်တွင် ‘တီ’ ဟု အသံကြားရမည်🔸 ထိုအချိန်မတိုင်ခင် 30 seconds မေးခွန်းဖတ်ချိန်ရပါသည်🔸 Test audio စသည်နှင့် နားထောင်နေချိန် မေးခွန်းများကို တစ်ပြိုင်နက် လိုက်ဖြေပါ🔸 ကွက်လပ်များတွင် One word သို့မဟုတ် Short Phrase ဖြေဆိုရပါမည်🔸 အဖြေတိုက်ပြီးလျှင် လွတ်သွားသော စာလုံးများ၊အကြောင်းအရာများကို Audio Script ကို နှိပ်ကြည့်၍ အသံဖိုင်ပြန်ဖွင့်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လေ့လာပါ Complete the note ... Read more Listening Test (2) – Part (A) – Extract (2)
Listening Test (2) – Part (B)
Part (B) In this part of the test, you'll hear six different extracts. In each extract, you'll hear people talking inadifferent healthcare setting.For questions 25-30, choose the answer (A, B or C) which fits best according to what you hear. You'll have time to read each question before you listen.Complete your answers as ... Read more Listening Test (2) – Part (B)
Listening Test (2) – Part (C) – Extract (1)
Extract (1)Questions - (31-36) How to Answer 🔸 Listening file ကို အရင်ဖွင့်ပြီး နားထောင်ပါ🔸 Listening audio ရှေ့ဆုံးတွင် မေးခွန်းအကြောင်း ရှင်းပြသံကြားရမည်🔸 Test audio စမည့် အချိန်တွင် ‘တီ’ ဟု အသံကြားရမည်🔸 ထိုအချိန်မတိုင်ခင် 90 seconds မေးခွန်းဖတ်ချိန်ရပါသည်🔸 Test audio စသည်နှင့် နားထောင်နေချိန် မေးခွန်းများကို တစ်ပြိုင်နက် လိုက်ဖြေပါ🔸 A / B / C ထဲမှ မှန်သည့်အဖြေကို ရွေးချယ် ဖြေဆိုရပါမည်🔸 အဖြေတိုက်ပြီးလျှင် လွတ်သွားသော စာလုံးများ၊အကြောင်းအရာများကို Audio Script ကို နှိပ်ကြည့်၍ အသံဖိုင်ပြန်ဖွင့်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လေ့လာပါ Extract 1: ... Read more Listening Test (2) – Part (C) – Extract (1)
Listening Test (2) – Part (C) – Extract (2)
Extract (2)Questions - (37-42) How to Answer 🔸 Listening file ကို အရင်ဖွင့်ပြီး နားထောင်ပါ🔸 Listening audio ရှေ့ဆုံးတွင် မေးခွန်းအကြောင်း ရှင်းပြသံကြားရမည်🔸 Test audio စမည့် အချိန်တွင် ‘တီ’ ဟု အသံကြားရမည်🔸 ထိုအချိန်မတိုင်ခင် 90 seconds မေးခွန်းဖတ်ချိန်ရပါသည်🔸 Test audio စသည်နှင့် နားထောင်နေချိန် မေးခွန်းများကို တစ်ပြိုင်နက် လိုက်ဖြေပါ🔸 A / B / C ထဲမှ မှန်သည့်အဖြေကို ရွေးချယ် ဖြေဆိုရပါမည်🔸 အဖြေတိုက်ပြီးလျှင် လွတ်သွားသော စာလုံးများ၊အကြောင်းအရာများကို Audio Script ကို နှိပ်ကြည့်၍ အသံဖိုင်ပြန်ဖွင့်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လေ့လာပါ Extract 2: ... Read more Listening Test (2) – Part (C) – Extract (2)
Week2– Day2Summary
Congratulation! You have completed Week2- Day2Lessons. Summary of Day2Lessons Listening Test (2) - Part (A) Listening Test (2) - Part (B) Listening Test (2) - Part (C) ➡ နောက်ရက်များတွင်လည်း Listening မေးခွန်းအစုံလိုက် လေ့ကျင့်ရပါမည် ➡ လေ့လာပြီးသား သင်ခန်းစာများကိုလည်း အချိန်မရွေး ပြန်လေ့ကျင့်၍ ရပါသည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark Complete ကို နှိပ်၍ ထွက်နိုင်ပါသည်